Caafimaadka Biden oo laga shakiyay kadib markii uu ku dul kufay diyaarad uu raacayay - Jowhar somali news leader
Home NEWS Caafimaadka Biden oo laga shakiyay kadib markii uu ku dul kufay diyaarad...
Caafimaadka Biden oo laga shakiyay kadib markii uu ku dul kufay diyaarad uu raacayay
Biden oo 78 jir ah ayaa diyaaradda ka raacayay Joint Base Andrews wax yar ka hor duhurkii isagoo u duulayay Atlanta markii uu turunturooday. Wuxuu qabtay birta, wuu istaagay wuuna iska sii watay fuulista diyaarada,laakiin mar labaad iyo mar saddexaadna wuu turaanturooday,balse ugu dambeyntii gudaha ayuu u galay diyaaradda.
Hase ahaatee markii uu ka degay Atlanta, Madaxweyne Biden wuxuu iska saarnaa diyaarada illaa ay Madaxweyne Ku-Xigeenka Kamala Harris – oo si gooni ah u duulay AF2 – ay kula soo biirtay diyaaradda.
Warbixinta Aqalka Cad waxaa soo saaray weriyeyaasha la safraya Biden ilbiriqsiyo gudahood dhicitaankii laakiin si weyn ugama aysan hadlin shabakadaha waaweyn ee wararka illaa 30 daqiiqo kadib markii ay dhacday waxaana laga waayey bogagga shabakadaha waaweyn ee waaweyn.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa ah 78 jir isagoo noqday Madaxweynihii ugu da’ada weynaa ee abid qabtay xilka madaxtanimada dalka Maraykanka.
madaxweyne Biden oo ku dul kufay diyaarad
Previous articleAlgeria demonstrates in thousands of demands for free press, judicial system
Next articleCongolese Sassou Nguesso tipped to win the fourth term in the presidential election